Machadka McKnight wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo xulashada Faye M. Price oo ah Farshaxanka Sharafta leh ee 2021, sharaf u sidata abaalmarinta $50,000 ee fanaanka Minnesota oo wax weyn ku soo kordhiyey nolosha dhaqanka gobolka.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan u dabaaldegno Faye, oo si qurux badan u muujiyay sida masraxa u hormarin karo wada sheekaysiga madaniga ah ee ku saabsan jinsiyadda, sinnaanta, iyo caddaaladda," ayay tiri Tonya Allen, oo ah madaxa McKnight Foundation. "Markay marxaladihiina dib u furmaan oo aan mar kale isugu nimaadno masraxa tooska ah, waxaan rajeyneynaa inaan aragno aragtida Faye iyo la -talinta fannaaniinta midabka leh inay sii wadaan inay ka dhex muuqdaan bandhigyada gobolka oo dhan."
Price ayaa dhawaan ka degtay kaalintii ay ku lahayd Tiyaatarka Pillsbury House, oo ah xarunta hal -abuurka iyo bulshada mid ka mid ah xaafadaha ugu kala duwan Minnesota. Ururku wuxuu isku daraa farshaxanka dhammaan barnaamijyadiisa, laga bilaabo waxbarashada carruurnimada hore ilaa ka -hortagga goynta ilaa dadaallada dhismaha deriska. Iyada oo la raacayo jihada Price, tiyaatarka ayaa hoy u noqday fannaaniin badan oo la mahadiyey, oo ay ku jiraan agaasime Marion McClinton, jilaa Laurie Carlos, iyo riwaayadda Tracey Scott Wilson.
Caddaynta sawirrada ee laga soo qaaday madaxa madaxa Qiimaha ayaa hore u qaatay xirfadeeda jilitaanka.
Lana Barkawi, agaasimaha fulinta iyo farshaxanka ee Mizna iyo xubin ka mid ah guddiga xulashada Abaalmarinta Farshaxanka ee Sanadkan.
Jilaaga Regina Williams ayaa sheegay in feejignaanta qiimaha ee faahfaahsan iyo xirfadaha isku dhafan ee gaarka ah ay gooni u dhigtay. "Faye wuxuu had iyo jeer joogaa qolka, si aad u wanaagsan, isagoo hubinaya in qof walba haysto wuxuu u baahan yahay," ayuu yiri Williams. “Sababtoo ah iyadu waa jilaa, riwaayad, iyo agaasime, waxay ku hagi kartaa bandhig hab aanan waligay arkin. Waxaan la kulmay tan marka hore markii ay i tilmaantay Nina Simone: Afar Dumar ah. Waxay saamayn weyn ku yeelatay hagitaanka ciyaarta tan iyo bilowgii ilaa marxaladaha adduunka. Waxay ahayd raad -raac, albaabada u furtay fannaaniin aad u badan. ”
“Faye waa wax walba oo uu farshaxanku noqdo. Iyadu waa caqli badan tahay, karti badan tahay, cabsan weyday, akhrin fiican tahay, laakiin sidoo kale is-hoosaysiisay. Waxay dariiqa u furtay dad aad u tiro badan welina sidaas ayay wadaysaa. ” —JAMES WILLIAMS, JIIL
Qiimuhu wuxuu ku koray Chicago wuxuuna dhigtey Jaamacadda Chicago Laboratories. Waxay shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaadatay Macalester College iyo shahaadada masterka ee masraxa oo ay ka heshay Jaamacadda Minnesota, halkaas oo ay ahayd qofkii ugu horreeyay ee qaata Ogosto Wilson Fellowship ee Dramaturgy iyo Dhaleeceynta Suugaanta. Waxay u ahayd riwaayad Tiyaatarka Guthrie dhowr iyo toban bandhig. Jilaa ahaan iyo agaasime ahaan, Price wuxuu la shaqeeyay liis dheer oo masraxyada maxalliga ah oo ay ka mid yihiin Penumbra, Dhiigga isku dhafan, Guthrie, Cagta Buurta, Dhalanteed, Tiyaatarka Jilayaasha ee St. Paul, Park Square, Jungle, Tiyaatarka Taariikhda , iyo Xarunta Ciyaartoyda, iyo sidoo kale tiyaataro caan ah oo ku baahsan dalka oo dhan, oo ay ku jiraan New York's Circle ee Fagaaraha iyo Heerka Xarunta Baltimore.
Jilaaga James Williams, oo markii ugu horreysay masraxa ka soo muuqday iyada markii ay ahaayeen ardayda dhigata Macalester. “Waa qof caqli badan, karti badan, cabsi la’aan, akhris wanaagsan, laakiin sidoo kale is-hoosaysiiya. Waxay dariiqa u furtay dad aad u tiro badan welina sidaas ayay wadaysaa. ”
Sannadka 2019, Qiimaha ayaa la hagaajiyay Watsons waxay aadeen Birmingham - 1963 Xarunta Kennedy. Sumcada sawirka: Yassine El Mansouri
Shaqadeeda tiyaatarka ka sokow, Price waxay kaalin hoggaamineed ka qaadatay u -doodista meel -marinta Wax -ka -beddelka Legacy Minnesota, kaas oo ay ansixiyeen cod -bixiyeyaashii 2008 waxaana la filayaa inuu bixiyo in ka badan $1.2 bilyan oo maalgelinta dadweynaha ah oo loogu talagalay farshaxanka dhammaan gobolka in ka badan 25 sano.
Alumna ka mid ah Seminar -ka Caalamiga ah ee Salzburg, Qiimaha wuxuu ka soo shaqeeyay guddiyo badan iyo guddiyada xulashada ee National Endowment for Arts, Doris Duke Charitable Foundation, Jerome Foundation, Guddiga Farshaxanka Gobolka Minnesota, McKnight Fellowships for Artists Theater, 3Arts in Chicago, New Masraxa Dawn, iyo Tofte Lake Center. Qiimaha wuxuu ka helay 2006 Catharine Lealtad Service Abaalmarinta Bulshada Kulliyadda Macalester iyo 2012 Sally Ordway Irvine Award for Initiative oo ka timid Xarunta Ordway ee Farshaxanka. Sanadka 2020, Muwaadiniinta Minnesota ee Fanka ayaa ku sharfay Abaalmarinta Larry ee ah “geesiga fanka ee aan la gaban”.
Price, oo ku nool koonfurta Minneapolis, waxaa soo xulay guddi ka kooban xubnaha bulshada oo leh aragti ballaaran iyo aqoon ku saabsan farshaxanka kala duwan ee gobolka iyo muuqaalka dhaqanka. Guddiga waxaa ka mid ahaa Marcus Young, farshaxanka masraxa iyo barre; Michele Anderson, agaasimaha miyiga ee Springboard for Arts; Lana Barkawi, agaasimaha fulinta Mizna; Carlton Turner, hogaamiyaha farshaxanka iyo isku-duwaha Dhaqanka Sipp; iyo Daniel Bergin, filim sameeye iyo soo saare sare iyo maamulaha iskaashiga ee Telefishanka Dadweynaha ee Twin Cities.
The Abaalmarinta Farshaxanka aqoonsadaa fannaaniinta doortay inay noloshooda iyo xirfaddooda ka dhigaan Minnesota, taas oo ka dhigaysa gobolkayaga meel hodan ku ah dhaqanka. In kasta oo ay lahaayeen hibo iyo fursad ay ku sii wataan shaqadooda meelo kale, farshaxan -yahannadani waxay doorteen in ay sii joogaan — iyo joogitaankooda, waxay sameeyeen isbeddel. Waxay aasaaseen oo xoojiyeen ururada farshaxanka, waxay dhiirigeliyeen fanaaniinta da'da yar, waxayna soo jiiteen dhagaystayaasha iyo macaamiisha. Waxa ugu fiican oo dhan, waxay sameeyeen farshaxan cajiib ah, oo fikirka kiciya. Ujeeddada barnaamijka Fanka & Dhaqanka ee McKnight waa in la xoojiyo hal -abuurka, awoodda, iyo hoggaaminta fannaaniinta shaqeeya ee Minnesota iyo kuwa dhaqanka haya. Barnaamijku wuxuu rumaysan yahay in Minnesota ay horumar gaadho marka ay dhammaan fannaaniinta iyo dadka dhaqanku ay kobcaan. Abaalmarinta Farshaxanka Sharafta leh ayaa sanad walba lagu sharfaa hal fanaan oo Minnesota ah.
The McKnight Foundation, aasaaska qoyska ee Minnesota, horumariya cadaalad badan, hal abuur leh, iyo mustaqbal badan halkaas oo dadka iyo meeraha ku koraan. Waxaa la aasaasay 1953, McKnight Foundation waxay si qoto dheer uga go'an tahay horumarinta xalalka cimilada ee Midwest; dhisida Minnesota loo siman yahay oo loo wada dhan yahay; iyo taageeridda fanka iyo dhaqanka Minnesota, cilmiga neerfaha, iyo cilmi-baarista dalagga caalamiga ah.